ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးသူတွေဟာ ဥာဏ်ပိုကောင်းသူတွေပါတဲ့ – Trend.com.mm
Posted on December 13, 2018 December 13, 2018 by Noel
သင်ဟာ အားကစားလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရမှာ မနှစ်သက်ဘူးလား? လေ့ကျင့်ခန်းတွေ မလုပ်ဖြစ်ဘူးလား? ဒါဆိုရင် သင်က တစ်ခြားသူတွေထက်ဥာဏ်ပိုကောင်းတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် 😉
Journal of Health Psychology ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ Florida Gulf Coast University က ကျောင်းသားအယောက် ၆၀ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ တစ်ဝက်လောက်က တစ်ခြားတစ်ဝက်ထက် အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အမှတ်မြင့်မားနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအမှတ်မြင့်မားနေတဲ့တစ်ဝက်လောက်က တစ်ခြားသူတွေထက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု နည်းပါးတယ်၊တက်ကြွမှုမရှိဘူးဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့ကြတာပါ။ဆိုလိုရင်းကတော့ သူတို့က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုထက် ဦးနှောက်တွေးခေါ်မှုကိုပိုပြီးလုပ်ဆောင်ကြလို့ပါပဲ။တစ်ခြားသူတွေတစ်ပတ်လောက်လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်နေချိန် သူတို့က တစ်ပတ်မှာသုံးရက်လောက်သာ ၀င်ပြီးပါဝင်လှုပ်ရှားကြတဲ့သူပါ။
လေ့လာသူပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Todd McElroy ကလည်း ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများများလုပ်တဲ့သူတွေဟာ အလွယ်တကူပျင်းရိလွယ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ပျင်းရိလွယ်တဲ့အတွက် သူတို့ကိုယ်သူတို့ လေ့ကျင့်ခန်းများများလုပ်ဖို့တွန်းအားပေးနေတာပါတဲ့။
စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုများများလုပ်ဖို့လိုအပ်လေ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းလေပါပဲ။တစ်ချို့လူတွေက စဉ်းစားတွေးခေါ်ရတာ ပိုကြိုက်ပြီး တစ်ချို့ကတော့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရတာပိုပြီးအားသာကြတယ်။ဒါကပုံမှန်ပါပဲ။ဓားကသွေးလေ ထက်လေဆိုသလို စဉ်းစားလေ ဦးနှောက်က
ထက်မြက်လေမို့ လေ့လာသူတွေဟာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးသူတွေက ဦးနှောက်ကိုပိုပြီးအသုံးချတယ်၊ဥာဏ်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ပဲလည်းမနေနဲ့ပေါ့။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ကျန်းမာရေးအတွက်ပိုကောင်းသလို ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်အတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
သငျဟာ အားကစားလကေ့ငျြ့ခနျးတှလေုပျရမှာ မနှဈသကျဘူးလား? လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ မလုပျဖွဈဘူးလား? ဒါဆိုရငျ သငျက တဈခွားသူတှထေကျဉာဏျပိုကောငျးတာ ဖွဈပါလိမျ့မယျ
Journal of Health Psychology ရဲ့ ဖျောပွခကျြအရ Florida Gulf Coast University က ကြောငျးသားအယောကျ ၆ဝကိုလလေ့ာကွညျ့တဲ့အခါမှာ တဈဝကျလောကျက တဈခွားတဈဝကျထကျ အတှေးအချေါပိုငျးဆိုငျရာမှာ အမှတျမွငျ့မားနတောကိုတှခေဲ့ရပါတယျ။အဲ့ဒီအမှတျမွငျ့မားနတေဲ့တဈဝကျလောကျက တဈခွားသူတှထေကျ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှု နညျးပါးတယျ၊တကျကွှမှုမရှိဘူးဆိုတာကို တှရှေိ့ခဲ့ကွတာပါ။ဆိုလိုရငျးကတော့ သူတို့က ရုပျပိုငျးဆိုငျရာလှုပျရှားမှုထကျ ဦးနှောကျတှေးချေါမှုကိုပိုပွီးလုပျဆောငျကွလို့ပါပဲ။တဈခွားသူတှတေဈပတျလောကျလကေ့ငျြ့ခနျးပုံမှနျလုပျနခြေိနျ သူတို့က တဈပတျမှာသုံးရကျလောကျသာ ဝငျပွီးပါဝငျလှုပျရှားကွတဲ့သူပါ။
လလေ့ာသူပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ Todd McElroy ကလညျး ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုမြားမြားလုပျတဲ့သူတှဟော အလှယျတကူပငျြးရိလှယျတယျလို့ပွောထားပါတယျ။ပငျြးရိလှယျတဲ့အတှကျ သူတို့ကိုယျသူတို့ လကေ့ငျြ့ခနျးမြားမြားလုပျဖို့တှနျးအားပေးနတောပါတဲ့။
စဉျးစားတှေးချေါမှုမြားမြားလုပျဖို့လိုအပျလေ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုနညျးလပေါပဲ။တဈခြို့လူတှကေ စဉျးစားတှေးချေါရတာ ပိုကွိုကျပွီး တဈခြို့ကတော့ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုလကေ့ငျြ့ခနျးတှလေုပျရတာပိုပွီးအားသာကွတယျ။ဒါကပုံမှနျပါပဲ။ဓားကသှေးလေ ထကျလဆေိုသလို စဉျးစားလေ ဦးနှောကျက
ထကျမွကျလမေို့ လလေ့ာသူတှဟော ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုနညျးပါးသူတှဟော ဦးနှောကျကိုပိုပွီးအသုံးခတြယျ၊ဉာဏျပိုကောငျးတယျဆိုတာကို တှရှေိ့ခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးမလုပျပဲလညျးမနနေဲ့ပေါ့။လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာကး ကနျြးမာရေးအတှကျပိုကောငျးသလို ဦးနှောကျပိုငျးဆိုငျရာအတှေးအချေါအတှကျလညျးအထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။